Canada Myanmar: 2009
ကနေဒါမြန်မာကွန်မြူနတီအထွေထွေအစည်းအဝေး ( တိုရွန်တို ၊ ကနေဒါ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:06 a.m. No comments: Links to this post
U2 တေးဂီတ အဖွဲ့ နှင့်တိုရွန်တို မြန်မာ လှူပ်ရှားသူများ
ဒေါ်စု အတွက် U2 တေးဂီတ အဖွဲ့ နှင့်တိုရွန်တို မြန်မာ လှူပ်ရှားသူများ
Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
U2 360 Toronto - Sep 16
Amnesty gives top honour to detained Myanmar democracy leader
DUBLIN – Myanmar's democracy leader, Aung San Suu Kyi, on Monday was named the recipient of Amnesty International' s highest honour, the Ambassador of Conscience Award. The human rights watchdog said it hoped this would help protect her as she facesapotential prison sentence.
Amnesty Secretary General Irene Khan said the award was timed to coincide with the 20th anniversary of Suu Kyi's initial arrest on July 20, 1989, as she ledacampaign to oust Myanmar's military dictators.
"In those long and often dark years, Aung San Suu Kyi has remainedasymbol of hope, courage and the undying defence of human rights," Khan said.
Suu Kyi, 64, is on trial for allegedly harbouring an American who swam out to her residence uninvited. The offence of violating house-arrest rules carriesapotential five-year prison sentence, and foreign diplomats have been barred from key parts of her trial. Suu Kyi's supporters accuse Myanmar's junta of seeking to put her behind bars until after elections planned for 2010.
Irish band U2 is publicly announcing Suu Kyi's award Monday night ataDublin concert.
U2 – which won the top Amnesty honour in 2005 in recognition of singer Bono's humanitarian work – has been honouring Suu Kyi at each performance of the band's European tour.
http://www.thestar. com/news/ world/article/ 672291
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:41 a.m. No comments: Links to this post
ကို မျိုး ချစ်
• အ၀င် အထွက်
ရုတ်ရုတ် သဲ သဲ
လှ ပ အပြုံး
အုံးအုံး ကျွက်ကျွက် ညံသတည်း ။ ။
စိုး မိုး သူ ( ၂၁ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး အမှတ်တရ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:43 a.m. 1 comment: Links to this post
မြန်မာ နှင့်မြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေး ပူးတွဲ မှူ့ အပေါ် အမရိကန် သတိပေး
Clinton condemns Burma regime Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:06 a.m. No comments: Links to this post
Grand Opening ceremony of Asian Community Games in Canada
Grand Opening ceremony of Asian Community Games
( Canada , Toronto )
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် လ ၁၇ ရက် နေ့သောကြာနေ့ညနေပိုင်းတွင် Canadian Multiculture Council မှဦးစည်း ကျင်းပသော
နိုင်ငံပေါင်းစုံ နွေရာ သီ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကွင်းဖွင့် ပွဲ အခမ်းအနားကို မြန်မာကွန်မြူနတီ နှင့်Burma Python Soccer Club
တို့ မှ ပါဝင် ပူးပေါင်း တက်ရောက်ခဲ့ ကြရာ တွင် တရားမ၀င် မြန်မာ စစ်အစိုးရ ၏ အလံ ကို အသုံးမပြုပဲ Union Flag မြန်မာနိုင်ငံ
( ကြယ် ၅ လုံး ) အလံကိုသာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် တရားဝင် အသုံးပြု ချီတက် ပါဝင် ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည် ။
ထိုကွင်းဖွင့် ပွဲ အခမ်းအနားကို Roger နှင့်OMNI ရုပ်သံလွင့် ဌါ နတို့ မှ လည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့် ပြသခဲ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:17 p.m. No comments: Links to this post
Canada ( Toronto ) Burma VJ Film Screening and Anniversary of 8888 National Uprising
Canada ( Toronto )
Burma VJ Film Screening and Anniversary of 8888 National Uprising
6:00 pm - A gathering in front of Royal Theater; (possible march to the theater)
7:00 pm - Introductory from Burma VJ's representative Speech (fromamonk leader andastudent activist) in the theatre
Follow by Burma VJ
Detail will follow soon....
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:42 a.m. No comments: Links to this post
နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာလာသော အခါ
နှစ် ၂၀ ကျော်လာသော တော်လှန်ရေး သမားများအပေါ် နားလည်စွာပြုံးမိပါသည် ၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး သို့ မဟုတ် နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိသော သူတိုင်း တချိန်မဟုတ်တချိန် အထီးကျန်ဆန်ခြင်းမျိုးခံစားခဲ့ ရဘူးမည်၊ တခါမဟုတ်တခါ မိမိ အယူအဆအတွေးခေါ်နှင့် မတိုက်ဆိုင်သူများဆီမှအတွင်း ပတိပခ ဆန့် ကျင်ဖက်စကားများ ကြားရတပ်ကြပါသည်၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအများစု၏အားနည်းချက်များမှာ မိမိ
ကိုမိမိ အထင်ကြီးတပ်ခြင်း တပါးသူကို အထင်သေးတပ်ခြင်း ၊ အခြင်းခြင်း အသိအမှတ်မပြုလိုခြင်း တို့ ဖြစ်ပြိး ထိုမသိစိတ်
များမှ တော်လှန်ရေး ၀ါ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအချင်း ချင်း ရန်သူထက်ပင် ပိုမိုစိတ်နာသွားကြရသည့် ဖြစ်ရပ်များစွာ
ဖြစ်နေကြပါသည်။ တော်လှန်ရေး တရပ်ကို အခြေအနေပေးသည့် နေရာမှစတင်ခဲ့ ရသည် ဖြစ်ပြီး အခြေနေအချိန်အခါအရ
မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာများ ပြောင်းလွဲနေခဲ့ ကြရကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အနှစ်၂၀ ကျော် ကာလကို ကြည့် လျှင်ပင်မြင်နိုင်
ကြပါသည် လမ်းပေါ်မှာထွက်၍ ဆန္ဒပြ နည်း ဖြင့် တော်လှန်ရေးကို ပြည်သူများစု ၈၈ ကသုံးခဲ့ကြရသည်မှာ မိမိတို့ ရွေးချယ်
ခဲ့ ကြခြင်းမဟုတ်ပဲ အချိန်အခါနှင့် အချေအနေကတောင်းဆိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ ပါသည် ၊ ကျွန်တော်အပါအ၀င် အချို့ တောခို
ခဲ့ ကြသည် လက်နှက်ကိုက်တိုက်ပွဲဖြင့်အပြုတ်တိုက်ရေး လမ်းစဉ် ဟုရဲရဲ ကြီးချမှတ်ကာ တော်ထဲတွင် နေခဲ့ ကြရသည်မှာ
လည်း အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ထို အချိန်က ထို သို့ ကျွန်တော်တို့ အား ယုံကြည်စေခဲ့ စေခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ၊ ဒေါ်စုနှင့် NLD ပါတီသည် အခြားလမ်းစည်များကို တော်လှန်သင့် ပါသလော ၊ တော်လှန်၍ရော ရပါမည်၊သင့် ပါမည်လော ၊ သူတို့ ၏
စိတ်ထဲ သို့ ဝင်ကြည့် ပါက စစ်အစိုးရကို သူတို့ ဘာလုပ်ချင်မည်ဟုထင်ကြပါသလည်း ၊ တောတွင်းလက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့ စည်းများ ABSDF မှအစ ယနေ့ ဘာဖြစ်နိုင်သည် ဘာမဖြစ်နိုင်တော့ သည်ကို သူတို့ ကောင်းကောင်းကြီးသိသလို့ အချို့ လည်း နည်းဗျူ
ဟာများ ဗြောင်ပြောင်းလွဲ ခဲ့ ကြသည် မှာ အမှားမဟုတ် ၊ ရှက်စရာများမဟုတ်ကြပါ ၊ အချို့ မှာ သိလျှက်ပင် ထိုအရာ များကို
ဆက်လက် ကိုင်စွဲ နေကြရသည်မှာလည်း အကြောင်းရှိပါသည်..
ယနေ့ အခြေအနေအရ တောင်းဆိုနေသောအရာ မှာ လက်နှက်ကိုင်တိုက်ပွဲသာဖြစ်သည် သို့ သော် ယခင်ကလို လက်နှက်မျိုး
များကိုင်ကာ တောထဲတွင် အောက်ချေ စစ်သားများနှင့်တိုက်နေရန် မဟုတ်တော့ ပါ...
ဒီနည်း ဗျူဟာကို တော်လှန်ရေး သမားတိုင်းနေရာဒေသတိုင်း က ထအော်နေ၍ မဖြစ်နိုင် မသင့် တော်ပါ သို့ သော်ကျွန်တော်
တို့ အားလုံး၏စိတ်ထဲတွင် ကျလိကလိဖြစ်နေအောင်ပင် ထောက်ခံနေကြသည် အားပေးနေကြသည်ကို သိစေချင်ပါသည် ။
မိမိ ဘော်လုံးအသင်း နှင့် အခြားအသင်း ကွင်းထဲတွင် ဘောလုံးကန်နေကြသည်ကို မိမိတို့ မှ အပြင်ကနေ စိတ်ရောကိုပါ အား
ပေးနေသလို မျိုး နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေသလိုမျိုးနှင့် တူပါသည် သို့ သော် အချို့ မှာ ကွင်းထဲသို့ ဝင်ကန်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါ သို့ 
သော် လူအား ငွေအား ၊ အကြံညာဏ်အား နည်း မျိုးစုံဖြင့် အားပေး ကြပါစို့ သင့် တော်ရာလမ်းကြောင်း နည်း စပ်ရာလမ်း
ကြောင်းများမှ တပ်နိုင်သမျှ အားပေးကြပါစို့ ဟုသာ ကျွန်တော်အားလုံးသို့ တောင်းဆိုလိုပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ၏ တစ်ဒေါ်လာမှ အစ ဘာညာ သာတကာ အဆုံး အားလုံး ထို ရဲရဲ တောက် အနစ် နာခံရဲသောလုပ်နိုင်သည့် 
သူများကို နည်းစပ်ရာ လမ်းကြောင်းများမှ ထောက်ပံကြစေလို ပါသည် ၊
ပြည်ပရောက် မိမိတို့ လွတ်လပ်သူများခြင်းခြင်း အမြင်မတူမှူများကို တပ်နိုင်သမျှ လျှစ်လှူ ရှူ ကြစေလိုပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ တော်လှန်ရေး ဂရပ် မျဉ်းကျောင်းမှာ အမြဲ တမ်း ကျဆင်းနေသည် ၊ ကျွန်တော်တို့ သည် တော်လှန်ရေး ချောင်ပိတ်ရိက်ခံနေကြရသော ခွေးများကဲ့ သို့ ဖြစ်နေကြရသည် ကို ကျွန်တော်တို့ ဝန်ခံရင်း ...မိမိ တနိုင်တပိုင် ဘာဆက်လုပ်နိုင်သည်ကိုသာစဉ်းစားကြစေလိုပါသည် ..
ရိုးသား နိမ့် ချစွာ ဖြင့် 
ကနေဒါ မြန်မာ တစု
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:08 p.m. 1 comment: Links to this post
• The world is rounding
on its pole…..
• But some parts were
• They are trying to dawn..
• If you love human rights…
• If you like rightness….
• If you have sympathy
• If you have compassion….
• Giveavoice to
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 3:08 p.m. 1 comment: Links to this post
မြန်မာတို့ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် လိုအပ်နေဦးမည့်ဝံသာနု အဖွဲ့ အစည်းလေးများ
သတင်းစာ အဟောင်းကလေးတခုကို အခြေခံပြီး ဤဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ရပါသည်
ပြည်ပရောက် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ အကြားတွင် ထိုကဲ့ သို့ သော အဖွဲ့ အစည်းမျိုး နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိ
သည်ဖြစ်စေ ၊ မည် သည့် နိုင်ငံရေး ကို နောက်ခံ
ထားသည်ဖြစ်စေ ၊ လူမှူရေး အသင်း အဖွဲ့ အစည်း
ပုံစံ ဖြင့် ဖြစ်စေ ရပ်ရွေ ရပ်မျိုးများကဲ့ သို့မိန် ရာ
ဟင်းကောင်း ခင်ရာရွှေမျိုး ဆိုသည့် သဘောဖြင့် ဝံသာနုစိတ်ဓါတ် ၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံကာ ထိုကဲ့ သို့ သော အဖွဲ့ ငယ်ကလေးများ မိမိတို့ နိုင်ရာနိုင်ရာ တူရာ တူရာ အားဖြင့် သော် ၄င်း ၊ ပို မို စည်းလုံးညီညွတ်မှူ သို့ မဟုတ် ပိုမိုအရည်အချင်းရှိသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ရနိုင်ပါက Under One Umbrella အဖွဲ့ အစည်းကဲ့ သို့ ကြီးမားသော လူမှူကူညီ ကယ်ဆယ် ရေး Community အနေဖြင့် သော် ၄င်း ရှိသင့် ကြပါသည် ။
မြန်မာပြည်ဖွါး တိုင်းရင်းသားမြောက်များစွာတို့ သည် နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတပါး သို့ ရရာ ရောက်
ရာ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ထွက်ခွာကြပြီး ကြုံ ရာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည် မှာ အဘယ်ကြောင့်
လို့ သင်ထင်ပါသလဲ ။
မည်သို့ ပင်သင်ဖြေစေကာမှူ ပြည်ပ ရောက်မြန်မာ လူမျိုးတို့ သည် မျက်နှာငယ်ကြရသည် အများစုတို့ မှာ အ
နည်း နှင့် အများဆိုသလို အနိုင်ကျင့် ခံကြရသည် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် တရားဝင် ထွက်ခွာ သွားကြသော သူများပင်
လျှင် ရောက်စ အခက်အခဲများစွာနှင့် တွေ ကြရသည် မှာမလွဲပင် ဖြစ်သည် ။
ဆိုလိုသည် မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာများသည် ရောက်ရာ နေရာ ဒေသတိုင်းတွင် တဦးနှင့် တဦး အပြန်အလှန် အ
ကူအညီလိုအပ်ကြသည် ပင် ဖြစ်သည် ။ ပြည်ပရောက်သံရုံးများသည်ထိုဒေသရှိ မြန်မာပြည်သူများကို ကိူညီ
ကာကွယ် စောင့် ရှောက်နိုင်ဖို့ နေနေသာ သာ အချို့ နိုင်ငံကြီးများတွင် သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပင် လူရာမ၀င်ပဲ ရဲဝန့် 
စွာ ရင်ကော့ လမ်းမလျှောက်ရဲကြပါပေ၊ အချို့ ပလင်းတူ ဗူးဆို့ နိုင်ငံများတွင် သူတို့ လူရာဝင်လျှင်တောင်မှ ပြည်
သူများအတွက်တော့ အကူအညီ မရသည့် အပြင် ဖေါ်လံဖါး အထက်ဖါး အောက်ဖိ ပုံစံမျိုး ဖြင့် ပြည်သူကို သာ ဖိ
နိပ် ဂုတ်သွေး စုတ်လေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံ ဒေသ အသီးသီး ရောက် မြန်မာတိုင်း သည် မိမိတို့ အချင်း
ချင်းသာ ပုံသန်တန်မျိုးစုံဖြင့် ဝံသာနုအဖွဲ့ အစည်း ကလေးများ ဖွဲ့ ၍ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုသကဲ့ သို့ အပြန်
အလှန် ကူညီ စောင့် ရောက်ကြ သင့် ပေသည် ။
ဘာသာတရားဖက်ကကြည့် ကြမည် ဆိုပါလျှင်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘာသာတရားအားလုံး၏ တူညီသော ဘုံသုံး
ကိန်း ဟုဆိုနိုင်သည့် သွန်သင်ဆုံးမမှူများမှာ လူလောက လူ့ မြေပြင်ပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ် ကာလအ
တွင်းတွင် တဦးကို တဦး အပြန်အလှန်အလေးထား ကြ၍ ဂုရုဏာတရား မေတ္တာတရား ကိုယ်ချင်းစာတရားများ
ဖြင့် ဖေးမကူညီ စောင့် ရှောက်ကြဖို့ ကိုသာ တိုက်တွန်းထားကြပေရာ ဘယ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်း ကိုပင် အ
ခြေခံ ဖွဲ့ စည်းစေကာမှူ ( အစွန်းရောက်ဝါဒ မဟုတ်လျှင် ) ကိုယ်နှင့် ဆက်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့် အမျှချစ်
လော ဟူသည့် ဥပမာ အတိုင်း နည်း စပ်ရာ မိမိ တို့ မြန်မာ ပြည်ဖွား အချင်း ချင်း ကူညီကြဖို့ ကိုသာ ဦးတည်
နိုင်ငံရေးဖက်က ကြည့် မည်ဆိုပြန်လျှင်လည်း မျက်စေ့ ရှေ့ က လက်တွေ ကျသော နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ သန်း
ငါးဆယ်သော ပြည်သူကို ကယ်တင်မည် ဆို သည့် အစား မိမိမျက်စေ့ရှေ့ ကအနည်းငယ်သော ပြည်သူ များကို
သာ ကူညီ ခြင်းသည် တိုက်ရင်း စီးယုံ စည်းယုံးရင်းတိုက်ဆိုသကဲ့ သို့ လက်တွေ့ ကျသော မျက်စေ့ ရှေ့ က တော် လှန်ရေး တရပ် ပင်ဖြစ်ပေသည် ။ ပါတီနိုင်ငံရေးဘဲဆိုဆို ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ ဘဲပြောပြော ၊ တော်လှန်ရေး
တရပ်ကိုပဲ ဆင်နွဲ ဆင်နွဲ မိမိနှင့် အနည်းစပ်ဆုံး မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းကို ကူညီ စီးယုံးနိုင်ဖို့ သင့် ပေသည်။
ထို့ ကြောင့် ပင် OBYCA ကဲ့ သို့ သော အဖွဲ့ အစည်းမျိုး နေရာတိုင်းတွင်ဖွဲ့ စည်း ခြင်း အားဖြင့် လက်တွေ့ ကျ
သော လှုပ်ရှားမှူများကို စတင်သင့် ကြပေသည် ။
ယခုအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုကဲ့ သို့ သော အဖွဲ့ များ ၊ ထို့ ထက် ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကျ
သော အဖွဲ့ အစည်းများစွာ ပေါ်ပေါက် နေသည်ကို တွေ့ ရပေသည် ။ သို့ သော် အချို့ နိုင်ငံများတွင် သူတလူငါ
တမင်း အကျင့် အတိုင်း သုံးချောင်းထောက် ကုလားထိုင်ကို လုနေကြဆဲ ဖြစ်သည် ။ ၁၉၉၂ ပတ်ဝန်းကျင်
လောက်က ပြည်ပေရောက်မြန်မာများအကြားတွင် အထူးသဖြင့် ဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးတွင် အားကောင်း
မောင်းသန် ကူညီ ကယ်ဆယ် နိုင် သည့်မားမားမတ် မတ် ရပ်ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့ များ သိပ်မရှိလှသေးပေ ။
ထိုသို့ သော အချိန် တွင် ၈၈ မျိုးဆက် လူငယ်တစု သည် ဘန်ကောက်ရောက် အဖိနိပ်ခံ မြန်မာပြည်သား
များ အတွက် တပ်နိုင်သလောက် တဒေါင့် တနေရာမှ အားပေးဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထို
Oversea Burmese Youth Christian Association ကို ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ကာ မိမိတိုင်သမျှဖြင့် စတင်
အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်လာခဲ့ ရာမှ ဒေသခံ အသင်းတော်များ ၊ NGOs များ ၏ ထောက်ခံ အားပေး
မှူကို တစတစ ရလာခဲ့ ယုံသာမကပဲ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ၊ လားအိုးနိုင်ငံ များမှ NGOs များအ
ထိပါ သွားရောက်ဆက်သွယ် အကူအညီများ ကို ရရှိလာခဲ့သည်မှာ နောက်လူတို့ နမူနာ ယူစရာဖြစ်ပါ
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကာလက YMBA အသင်းကြီး၏ လှုပ်ရှားမှူများကဲ့ သို့ ပင် ပြည်ပရောက်မြန်မာ
လူမျိုးများ ၊ ဘန်ကောက်ရောက်မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထိုအချိန်က မှာ တော့ ဘန်ကောက်ရှိမြန်မာ ခရစ်
ယန် ဘုရားကျောင်းများသည် မြန်မာလူမျိုးတို့ အတွက် အသင့် တော် ဆုံး စုရပ် ဆုံ ရပ် ဖြစ်ခဲ့ ပေရာ ထို
OBYCA အသင်း ကြီး၏ အချက်ကျသော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှူကို မြင်တွေ့ နိုင်သလို သူတို့ ဘာကို ဦးတည်
အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားကြသည်ကိုလည်း တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည် ။
( ၁၉၉၅ ခု နှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် ခေတ်ပြိုင် သတင်းစာ ဟောင်းလေး တခုမှ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်
ဖတ်ရှူရင်း ၍ဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပေါ်လာရပါသည် ။ သတင်းစာဟောင်းလေးကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပြထားပါသည် ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:22 p.m.2comments: Links to this post
လွမ်းရပါပြီ ဂျာမဏီ ( ၁ )
လွမ်းရပါသည် မြန်မာပြည် ( ၀ထ္ထုတို )
ဂျာမဏီ နိုင်ငံ၏နယ်သာလန်နှင့် ဒတ်(င်္ချတ်)သုံးနိင်ငံဆုံရာ နယ်စပ်မြို့ တမြို့ ဖြစ်သော အာချင်မြို့ ၏
တနင်္ဂနွေနေ့ နေလည်ပိုင်းသည်အေးစိမ့်စိမ့်စည်ကားနေဆဲx x x x x x x x x x ဟိုင်း x x x x x ဟဲလို x x x
x x ဟိုx x x x x ယူက x x x x x မြန်မာပြည်ကလားဟင်x x x x x ကျွန်တော်အံအားသင့် သွားခဲ့ ရသည် x
x x x x ချက်ခြင်းပြန်မဖြေ နိင်ခဲ့x x x x x ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပါ x x x x x ညီမကရောဒီ
ဂျာမဏီ မှာ ရောက်နေတာကြာပြီလား x x x x x ကျွန်မနာမည်က x x x x x သဲသဲ ပါ x x x x x သဲသဲ တို့ 
ဂျာမဏီမှာ ရောက်နေတာ ၁၂နှစ်လောက်ရှိပါပြီ x x x x x ရှစ်နှစ်သမ္မီး ကထဲက မြန်မာပြည်က ထွက်လာခဲ့ ရ
တာပါ x x x x x အကို့ လွယ်အိတ်မှာ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာတန်း ကို မြင်ပြီး မြန်မာပြည်ကပဲဆိုပြီး အားရ၀မ်း
သာလာနုတ်ဆက်တာပါ x x x x x
သူမအမူအရာကသွက်လက်ပွင့် လင်းသည် x x x x x အာရှ ကပြားပုံပေါက်နေသည် x x x x ကျွန်
တော်လွယ်အိတ်ကလေးကို ကိုင်ကြည့် ရင်း x x x x x အင်း ဘာ x x တဲ့ x x အော် x x x ကျောင်းတေသာ
x x ဟင်း ဟင်း x x x ဟုတ်လားဟင် x x x ဘာလဲ ကျောင်းတေသာ ဆိုတာ x x x သူ့ မျက်နှာပေါ်တွင် အံ့ 
သြမှူ ခင်မင်ရင်းနှီးလိုမှူ ဖေါ်ရွေမှူတို့ ကပေါ်လွင်နေသည် x x x x x
ကျောင်းတော်သားပါ x x x x x ကျောင်းတော်သားဆိုတာက ဒီလွယ်အိတ် ပြုလုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီရဲ့ နာ
မည် ဆိုပါတော့x x x ဟဲ ဟဲ x x x ကျွန်တော်လည်း ပြောမိပြောရာ ပြောချလိုက် မိသည်x x x သဲသဲက သုံး
တန်းလောက်အထိပဲ မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့ ရတာလေ x x x မာမီနဲ့ ဒယ်ဒီနောက်ကို လိုက်လာခဲ့ ရတာ မြန်မာ
စာတွေ နဲနဲ မေ့ ကုန်ပြီ x x x အော် အကို အချိန်ရလားဟင် x x x အခုဘယ်မှာနေ နေလဲ x x x ဘာလာလုပ်
တာလဲ x x x ဘယ်တော့ ပြန်မှာလဲ ဟင် x x x သူ့ ကစားသံက ၀ဲနေသည် x x x ကျွန်တော့် ကို မေးခွန်းတွေ
တသီကြီးမေးရင်း အကဲခတ်သလို ငေး ကြည့် နေသည် x x x x x
ကျွန်တော် ကိုယ်ချင်းစာမိပါသည် x x x မြန်မာ ငတ်နေသော မြန်မာပြည်မှ ဝေးကွာနေသူတို့ ၏ခံ
စားချက်မျိုး သူ့ မှာ ရှိနေပေလိမ့် မည် x x x ကျွန်တော် ခုလောလောဆယ် မစ်ဇီအို ကက်သလစ် ခရစ်ယန်ဂစ်
ဟောက် မှာ တည်းနေပါတယ် x x x NGOs ကိစ္စ အစည်းအဝေး လာတက်တာပါ x x x နောက်နှစ်ပတ်လေက်
ကြာရင် ပြန်ရမှာပါ x x x ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အတူလာတဲ့ဖါသာကြီးတွေ ဘုရား ၀တ်ပြု
နေတုန်း မြို့ ထဲ ကို လျှောက်လည်ကြည့် တာပါပဲ x x x x x
ဟယ် x x x ဒါဆိုရင် အိမ်ကို ခေတ္တ လိုက်လည်ပါလားဟင် x x x ဒယ်ဒီတွေ့ ရင် ၀မ်းသာမှာပဲ မြန်
မာစကားတွေအများကြီးပြောရအောင်ဟုဆို ကာ သူ့ အိယ်သို့ အလည် ခေါ်သွားသည် x x x ကျွန်တော်ဘယ်လို
မှ မျှော်လင့် မထားခဲ့ မိပါ x x x ဂျာမဏီ ရောက်စ က ဖရန့် ဖို့ လေဆိပ်တွင် မြန်မာ တယောက်ကို တွေ့ ခဲ့ ဘူး
ပါသည် x x x သို့ သော် ဤ နယ်စပ် မြို့ ကလေးတမြို့ ဖြစ်သော အာချင်မြို့ ကလေးတွင် မြန်မာ ရှိနေလိမ့်မည်
ဟု ဘယ်လို မှထင် မထားခဲ့ မိပါ x x x x x
သဲသဲ မောင်းသော ကား အနီ ကလေးကို စီး နေ စဉ် ကမ္ဘာအနှံ့ တွင်မြန်မာတွေရောက်နေပါပြီလား
ဟု အံ အောဝမ်းသာ တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ် ပြုံး မိသည် x x x ထို့ ထက်ပို၍ အံ အားသင့် ရသည် က အိမ်ပေါ်
အရောက် ပုဆိုးဝတ်ထားသော သဲသဲ ၏ဖခင် ဦးအောင်ကို အား တွေ့ လိုက်ရသောအခါတွင်ဖြစ်သည် x x x x
အန်ကယ် အမျိုးသမ္မီး က ဂျာမန်သူ သဦးပါ x x x တခါတလေ အန်ကယ်တို့ မိသားစု ဖရန့် ဖို့ မြို့ ကိုတက်ကြ
တော့ မှပဲ မြန်မာ အချို့ နဲ့ တွေ့ ရတာပါ x x x ဒါပေမဲ့ အန်ကယ်တို့ အိမ်မှာ လည်း မြန်မာစကား တခါတလေ
သုံးကြပါတယ် x x x အန်ကယ်ဦးအောင်ကိုက ၀မ်းသာအားရ ရှင်းပြသည် x x x x x
သူ့ ၏ ဧည့် ခန်းတွင် အလှဆင်ထားသော ထည်ဝါသည့် စောင်းကောက်ကြီး နှင့်မြန်မာ ကောက်ရိုး
ပန်းချီ ကားများ ၊ ပုဂံ လက်ရာ ယွန်းထည် ပြစ္စည်းများ နှင့် ရွှေ တိဂုံ ဘုရားပုံ ပန်းချီ ကားချပ်ကြီးတို့ က သူတို့ မြန်
မာပြည် ကို အဘယ်မျှ လွမ်းဆွတ် တမ်းတ နေကြသည် ကို ကျွန်တော်ခန့် မှန်းမိပါသည် x x x x
ပြီးခဲ့ တဲ့၈၉ ခု နှစ်လည်လောက်က တို့ မြန်မာ မိသားစု တွေ စုပြီး ထိုင်း နိုင်ငံ ကို အလည် ရောက်
ကြသေးတယ်လေ x x x ထိုင်း နယ်စပ်ဖက်ကို မြန်မာလူငယ်လေးတွေ အများကြီး ထွက်လာတယ် ကြားလို့ x x
x x x သွားတွေ့ ကြ ရင်းနဲ့x x x အင်း x x x ဦးအောင်ကို စကားသံ အနည်း ငယ် တိုးသွားနှေး သွားသည် x x
x x x အင်း x x x ထိုင်းမြန်မာ နယ်စမ် ချင်း ရိုင်ကို နှစ် ညအိပ်သွားလည် ကြရင်း x x x မြန်မာ ပြည်ဖက်ကမ်း
က တောင်တန်းကြီးတွေ ၊ အိမ်ငယ် ငယ် ကလေးတွေကို တ၀ ကြီး ငေး မျှော် ကြည့်ပြစ်လိုက်ကြသေးတယ် x x
ဟဲ x x ဟဲ x x x x x
သူက ရယ်မောစွာ ပြာသော်လည်း ကျွန်တော် ကတော့ မရယ် နိုင်ပါ x x x ကိုယ့် နိုင်ငံ ကို ကိုယ်ပြန်
ငေးမျှော်ကြည့် ရင်း x x x အလွမ်း ဖြေ ခဲ့ ရပါ သည် ဟူ သော သူတို့ လို အလွမ်းမျိုး ကျွန်တော်လည်း x x x x ခံ
စား လာရဦးမည်လော ဟူသော အတွေး မျိုး ကျွန်တော် ချက်ချင်းတွေး မိသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည် x x x x x
မြန်မာပြည် အကြောင်းများကို သူတို့ အငန်းမရ မေး ကြသည် x x x ဖြေရသည်ကို ပင် ကျွန်တော်
ပျော်ပါသည် x x x သူတို့ ကဲ့ သို့ သော အမိမြေကိုလွမ်းနေကြမည် အဝေးရောက် မြန်မာ များ အဘယ်မျှ ရှိနေ
လေမည် နည်း ဟု စိတ်ထဲ မှ တွေးနေမိပါသည် x x x x သဲ သဲ က ယွန်း ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နွားလှည်း ရုပ်
ကလေးကိုယူရင်း x x x ဒီလို နွားကားကလေးတွေ မြန်မာ ပြည်မှာ ရှိနေသေး လား x x x သဲသဲ စီး မောင်းချင်
လိုက်တာ x x x နွား ကား ဟု သူ မှားပြောခဲ့ သော်လည်း ကျွန်တော် မရယ်နိုင်ခဲ့ ပါ x x x အချို့ မြန်မာ ဝေါဟာ
ရများကို သူတို့ မသိနိုင်တော့ ပြီ ပေါ့ x x x သဲသဲ ဤ မျှ မြန်မာစကားပြောတပ်နေသေးသည်ကိုပင် ဦးအောင်ကို
အား ကြိတ် ၍ လေး စားနေမိပါ သည် x x x
သူတို့ မိသား စု ကို ကျွန်တော် လက်ပြ နုတ်ဆက်ရင်း Thai Airway လေယဉ် ကြီးပေါ် သို့ ကျွန်တော်
တက်လာခဲ့ ပါသည် x x x ကျွန်တော် ပြန်ခါနီး မုံဟင်းခါးချက်ကျွေး မယ်ဟုဆိုကာ သဲသဲ ချက်ကျွေးခဲ့ သော မုံ့ 
ဟင်းခါး အရ သာနှင့် မတူသည့် ထို မုံ့ ဟင်းခါး ဆိုသော အရာကို ကျွန်တော် သတိယ နေမိပါသည် x x x မပီမသ
နှင့် သဲ သဲ ဆို ပြခဲ့ သော ကမ္ဘာ မကြေ သီချင်း ကို လည်း ကျွန်တော် ပြန်လည် ကြားရောင်နေမိပါသည် x x x
ဗမာဟာ ဗမာ ပဲ ကွ တဲ့ဘယ်တော့ မှ ဒေါင်း ယောင် ဆောင် သောကျီး လုပ်ဖို့ မသင့် ဘူး ကွ တဲ့ x
x အန်ကယ် ဦးအောင်ကို ၏ စကားကို ကျွန်တော် ပြန်လည် ကြားယောင်မိတော့ လည်း ပိုက် ဆံ ရှိ ပညာ တပ်
သွားပေမဲ့ လည်း ဘ၀ မမေ့ တပ်သော ၊ အမျိုးသားရေး စိတ် ထက်သန်နေသေးသော အန်ကယ် ဦးအောင်ကို
လို မြန်မာ ကြီးများ အခြားနိုင်ငံ များတွင် လည်း ရှိနေကြ ဦးမည် လော ဟု အတွေး မျှင် ဆန့် နေမိသည် x x
x အင်း x x x နွားလှည်း စီးချင် တယ် ဆို သော သဲ သဲ ၏ စကား လေး ကို သူတို့ အိမ်ခြံ ၀န်းထဲ တွင် ရပ်ထား
သော ဂျာမန် ကားလှလှ သုံး စည်း က စိတ်ဆိုး နေမည် လား မသိ x x x
ကျွန်တော် လွယ်အိတ်ကလေး ကို သဲသဲ အား လက်ဆောင်ပေးခဲ့ စဉ်က x x x သဲသဲ ပြန်၍ လက်
ဆောင်ပေးလိုက်သော စက္ကူအိတ်နှင့် ပိတ်ထားသည့်အချပ် တခုကို ကျွန်တော် ဖြေးညှင်း စွာ ဖေါက်ကြည့် 
လိုက်သည် x x x အမျိုး အမည် မသိသော ခံ စားချက် တခု ကြောင် ကျွန်တော် မျက်ရည် လည် လာမိသည်
သူ ပြန်ပေး လိုက်သည့် လက်ဆောင် က သူ သိပ်မြတ်နိုး သည် ကောက်ရိုး ပန်းချီ ကားချပ်ကလေး ပါ x x x
x x ကိန္နရီ ၊ ကိန္နရာ မောင်နှံ လပြည့် ည တွင် နဖေါ် ယှဉ်တွဲ ပျံ ၀ဲ နေကြ သည့် ပုံ လေး x x x x x သူတို့ ရော
လ ပြည့် ည မြန်မာ ပြည် ကောင်းကင် ထက်တွင် ပျံ ၀ဲနေကြသည် လော x x x x x
လ ပြည့် ည မြန်မာ ပြည် ထက်တွင် သူတို့ ပျော်ရွှင်စွာ ပျံ ၀ဲ နိုင်ကြပါစေ x x x x x ပျံဝဲ နေသော
ထိုင်း အဲယား ဝေး လေယဉ် ပျံ ကြီး ကတော့ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်ရန် စတင် ကြိုး စားနေပါပြီ
သို့ သော် ပျံ ၀ဲ နေသေး သော ကျွန်တော် အတွေး စတို့ က ဆင်းသက်ရန် နေရာ မရှိသေး ပါ x x x x x
ကျွန်တော်သည် ပင်လည်း မြန်မာပြည်မဟုတ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာပင် ခရီး အဆုံး
သတ်ရဦးမည် မဟုတ်ပါ လား x x x ကျွန်တော့် ဘ၀ ရော နောင် ဆယ် နှစ် အကြာ တွင် ဦးအောင်ကို လို ဖြစ်
လာ လိပ့် ဦးမည် လော x x x x x ကိုယ့် နိုင် ငံ ကို လွမ်းတိုင်း နယ်စပ် တနေ ရာ မှနေ၍ လာရောက် ပြန်လည်
ငေး မျှော် ကြည့် ရ ဦးမည် လော x x x x x နေ ပြည်တော် မျော်လေတိုင်း ဝေး ပြီလော x x x x x
အော် x x x x x လွမ်း ရပါ သည် x x မြန်မာ ပြည် ရယ် x x x x x
အော် x x x x x လွမ်း ရပါ ပြီ x x ဂျာမဏီ ရယ်
October7, 1996 ( ရပ်ဝေး မြေ ခြား ၀ထ္ထု များ ၊ စာအုပ် မှ )
၁၉၉၉ ( မြန့် မာ စောင်း စာ စောင် မှ ၊ တိုရွန်တို ၊ ကနေဒါ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:32 p.m.5comments: Links to this post
မြန်မာ ပြည် သင်္ကြန် သို့အလွမ်း ပြေ ကဗျာ များ
ဒို့ များ မြန်မာ
တမ်းတ အိမ်မက် ခါခါတည်း ။ ။
( ရိုးရာ ရေမြေ နှင့် အတိတ် သင်္ကြန်ည များစွာကို လွမ်းရင်း
နေပြည်တော် မျော်လေတိုင်း ဝေးပြီလော...... )
မှန်းဆ ရေးရေး မျှသာတည်း ...။ ။
( ကနေဒါ ဧပြီလသည် အေးနေသေးသဖြင့်ခန်းမကြီးများထဲတွင်သာ
သင်္ကြန် အတု ဖန်တည်း အလွမ်းဖြေလာခဲ့ ရသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် ကြာ
ပြီဖြစ်သော မြန်မာတို့့၏ဘ၀သည် နှစ်စဉ်ထွက်သမျှ သင်္ကြန်ခွေက
လေးများကို နားထောင်ရင်း ကြည့် ရင်း...မှန်းဆ ရေး ရေး မျှသာဖြင့် ...)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:14 p.m.3comments: Links to this post
(မြန်မာပြည်၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးကို သွေးဖြင့် 
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:52 a.m. 1 comment: Links to this post
နီး နိး ဝေး ဝေး
တော် လှန်ရေး သည်
ဖြေး ဖြေး မှန် မှန်
ဆက်လျှောက်ရန်တည့် ။ ။
အနီး မှ စ တော်လှန်ကြလော့ 
သူ ဖေါက် ပြန်ပြီ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:23 a.m. 1 comment: Links to this post
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:54 p.m.2comments: Links to this post
လားရှိုး သိန်းအောင် နောက်ဆုံး သီချင်း
La sho Thein Aung's latest song Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
အနုပညာရှင်တွေ ဘာလို့ တိုင်းပြည်က ထွက်သွားကြရတာ လဲ ၊ အစိုးရကို ဖါးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပြည်သူ တွေကလေးစားကြပါသလား
၊ တွေးခေါ် ခံစားချက်များမှ ပေါက်ဖွားလာရ သော အနုပညာကို ထိမ်းချုပ်ကန့် သတ် သင့် ပါသလား ၊
စဉ်းစား၍ ပေါက်ဖွားစေမှာ လား ခံစား၍ပေါက်ဖွားစေမှာ လား စစ်အစိုးရဆိုသော သူများခင်ဗျား
ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မိုင်းမတိုက်ကျေး ၊ ပြည်သူများ ( လွတ်လပ်စွာ ) စဉ်းစားကြပါ
ဖြေကြပါ စို့ 
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:50 p.m. No comments: Links to this post
မြန်မာတို့ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် လိုအပ်နေဦ...
Canada ( Toronto ) Burma VJ Film Screening and An...
Grand Opening ceremony of Asian Community Games in...
မြန်မာ နှင့်မြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေး ပူးတွဲ မှူ့ အပေ...
Amnesty gives top honour to detained Myanmar democ...
U2 တေးဂီတ အဖွဲ့ နှင့်တိုရွန်တို မြန်မာ လှူပ်ရှားသ...
ကနေဒါမြန်မာကွန်မြူနတီအထွေထွေအစည်းအဝေး ( တိုရွန်တို...